प्रकृतिको नियमनै हो ,एकले अर्कोलाई आफ्नो शरीर दिएर बचाउ गरेको हुन्छ कसरी ? - Enepalese.com
प्रकृतिको नियमनै हो ,एकले अर्कोलाई आफ्नो शरीर दिएर बचाउ गरेको हुन्छ कसरी ?
डिल्ली खतिवडा २०७७ चैत २५ गते १०:३८ मा प्रकाशित
प्रकृतीको नियम भन्दा माथी उठेर मनुष्यले काम गरेको हुदा प्रकृतिको अत्यको सुरुवात हुदैछ कसरी ?
प्रकृतिमा एक जिवले अर्को जिवको जीवन निर्माणको काम गरि राखेको हुन्छ । बोट बिरुवाको आवस्यक एन पी के दिने काम सूक्ष्म जीवाणुले गरेको हुन्छ । त्यो जीवाणुलाई ग्लोकुज दिने काम तिनै बोटबिरुवाले आफ्नो जराबाट गरि राखेको हुन्छ ! फल अन्न र पराग शाकाहारी जिवजन्तुलाई दिने काम बोट बिरुवाले गरेको हुन्छ !
शाकाहारी जिवले मांशाहारी जिवलाई आफ्नो शरीर दिएर पुराग री राखेको हुन्छ । बाघले कुनै पनि जिवको सिकार गर्छ तर हिंसा गर्दैन । प्रकृतिले यहि जीव जिवश्री जिवनमा प्रकृयाको पूरा गरेको हुन्छ । त्त्यसैले हामी यस्लाई( इकोलाजी ) भन्ने गर्छौ ।यो इकोलाजिमा बाघले यदि अहिंसाको पढौ भने के हुन्छ ?
साकाहारी जिवले सारा जङ्गल बोटबिरुवा खाएर सक्छ्न ।
प्रकृतिमा जनावरको बिचमा बाघले गरेको हुन्छ । माटोमा पनि त्यहि काम किरा फटेङ्रा चराचुरुङ्गीले गरि राखेको हुन्छ । त्यहि काम माटोमा भएको जिवाणुमा सोडोमोनास जिवाणुले गरेको हुन्छ । प्रकृतिमा जसरी सोडोमोनास जिवाणु घटदै जान्छ त्यसरी नै बाघ किरा फटेयांग्रा चरा चुरुङ्गी आदिको संख्या घटदै जान्छ ।
प्रकृतिको १ ग्राम माटोमा असख्य शुसुक्ष्म जिवाणुको घर हुन्छ ।
किषानले उत्पादन गर्ने माटोमा रसायानिक विषाक्त हालेर मित्र मांसहारी जिवाणु ( सोडोमोनास बिषेरिया मेटाराइजियम )को सखाप पारियो भने प्रकृतीले दिएको माटोमा सुक्ष्म सकाहारी जिवाणु ( फ्युजेरियम फाइटोपथोरा रैजोक्टोरिया पिथियम ) को संख्या ले माटोमा घर बनाउने छ्न।
अब किसानहरुले आफै बुझ्नु होस , प्रकृतिको माटोमा सुक्ष्म शाकाहारी जीव धेरै भयो भने व्हाइटटफ्लाइ बग इलिया आदि किरा बढने छ । र प्रकृतिको माटोमा मांसाहारी जीव घटछ र माटोमा पनि शुस्म जीव घटछ !
त्यहि भएर हामिले राषायनिक मल बिसादी हालेर प्रकृतीमा सुक्ष्म जीव किरा फटयांग्रा आदिलाई रोक्नु हुदैन ।
अर्गानिक कृषि अभियान नेपाल
डिल्ली खतिवडा झापा मेची नगर १४